बिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् – वास्तविक मनछुने कथा” – Krazy NepaL
March 8, 2021 752
बिहेको दिन बेहुली अनमाई कार भित्र दुलही राखियो । म पनि उनीसँगै गाडि भित्र पसे । उनका साथीहरु बाहिरबाट कोई वाई वाई को इसारा, कोहि रुदै त कोहि बेहुलिलाई हसाउदै थिए ।
तर उनी एकोहोरो रुदै थिईन अनि कताकता म पनि रुन बाध्य हुन्छु जस्तो लाग्दै थियो तर मेरा साथीहरूले मलाई पनि हसाँई रहेका थिए । हाँस हाँस आजै हो हास्ने दिन भोलिबाट रुनु पर्छ त्यसैमा अर्को साथीले थप्यो, थाहा छ !
केटी रुने भनेको बिवाहको दिन मात्र हो तर केटा हाँस्ने भनेको त्यही बिहेको दिन हो, बिवाह पछि रुनु मात्र पर्छ । ह्या हावा कुरा नगर केटा हो भनेर कारको सिसा लगाए । ता कि साथमा भएकी जीवन संगिनीलाई कुनै असर नपरोस भनेर ।
मनमा एउटा सोचाई आयो साथीहरुले भनेको । के साच्चै बिहे पछि रुनु पर्छ ? के बिवाह गरेका मानिसहरु साच्ची नै असन्तोस हुन्छन त ? के संसारका सारा मानिस बिहे पश्चात रुनु नै परेको छ त ?
झन दुबैको साथ मिले त संसार जिउन सजिलो हुन्छ भन्ने सुनेको थिए । जीवनसँगै जिउनी भनेर बाचा गरेपछि त दुबैले दुबैलाई sacrifice त गर्नु त पर्याे नि । त्यसपछि त गुरुजीले कुदाउनु भयो कार । उनी तिर हेरे उनी रोईरहेकी थिईन ।
उनी रोएको देखेर मलाई नै नरमाईलो लाग्यो । अगी सम्म सबैको अगाडि हासेँकी थिईन । म खुसी छु हजुरहरु नरुनु है रुन हुन्न म सधाको लागि टाढा भएकी त होइन भन्दै आफ्ना आमा बाबुलाई सम्झाएर खुसी हुँदै आएकी दुलई आमा बाबू छोपिनसाथ रुदै थिईन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
दिद र सानी बहिनी आएर एउटाले पानी र अर्काेले दियो लिएर हामीलाई घुम्न थाले । त्यसै गरि अर्काे पट्टि आयो छोरा बुहारी लिएर मैले छोरो पाएकी थिए र भन्दै रत्यौली घन्कीदै थियो । सबैको दुलई हेर्ने घुईचो थियो ।
बाहुबाजे देखिबाट चलेको रितिरिवाज रे बेहुलीले आफ्नता जनलाई ढोग गरेर साडी दिनुपर्ने रे । यो चलन मलाई कति मन परेन । मन परेन भनेर नि म के गर्न सक्थे बाबू आमा मान्दैन चलेको रितिरिवाज हो त्यैले भनेर हुन्छ भन्छन् ।
Prevब्रोकाउली खानुका यस्ता छन् १० फाइदा, मुटु रोगदेखि क्यान्सर हुने खतरा कम गर्ने
Nextमोटो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? रातको समयमा भुलेर पनि नखानुहोस यि चिज
सात बर्षको बालकले आफ्नै शिक्षिकालाई के गरे यस्तो जहा पुलिस नै आउनु पर्यो
आज ०५ जेठ २०७८ बुधवार गणेश भगवानको दर्शन गरी हेर्नुहोस् राशिफल
सियोना श्रेष्ठलाई बचाउन २५ करोडको आवश्यक ;सके सहयोग गर्नु होस नसके प्राथना गर्नुहोस्